Disposable Face Mask Manufactures and Factory - China nwere ike ibu ndị na-ahụ maka ihu ihe nkpuchi
Ma ọ bụ SARS ma ọ bụ oyibo coronavirus oyi, uwe nchebe ahụ ike na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọdịdị ọ bụla nke nje ahụ, ogo nke uwe mkpuchi ahụike ji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma site na iji nkà na ụzụ mmepụta ihe. Isiokwu a ga-akọwa nke ọma uwe mkpuchi ahụike n'akụkụ ndị a. Ihe ndị a chọrọ maka ụdị akwa mkpuchi ahụike Kedu ụdị elele nke na-ahụkarị? Kedu ihe ihe nnwale ahụ? Eji otu esi eji eriri nchebe ...
Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg. 3. Nchedo ihe ndị na-egbu Organic na ísì 4. Nchedo nke ụmụ irighiri ihe na -eme ka mkpịsị aka, nhicha, ịsa ahụ na akpa. na nhazi nke ore, kol, iron iron, ntụ ọka, metal, osisi, pollen na ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Ihe ndị na -eme ka mmiri mee ka ọ dị ọcha ma ọ bụ nke na-eteghị mmanụ.
Kedu usoro na ụdị ndị na-ewu ewu maka uwe nchebe. Uwe mkpuchi ahụike bụ ngwakọta nke okpu, akwa, na uwe mmiri. Enwere ụdị uwe mkpuchi ahụike abụọ: uwe mwepu na uwe nchebe. Isi ihe dị iche n'etiti uwe mkpuchi ahụike na uwe mwepu bụ na uwe mkpuchi ahụike dịtere aka karịa uwe mwepu, ọkwa nchebe dị elu, arụmọrụ nchebe ka mma, ebumnuche nchebe na p ...
Ihu mkpuchi nke Carbon Filter Face
Emeputa uwe nchebe. Uwe mkpuchi ahụike a na-ejikarị okpu, elu na uwe ogologo. Site na ịkpụ, ntinye, uko, teepu mkpọchi na teknụzụ ndị ọzọ na-emepụta, anyị nwere ike iwepụta uwe nchebe ahụike ruru eru. N'ime usoro ahụ niile, igwe dị na ya bụ igwe na-adụ akwa na igwe na-agbanye. Igosi odi nma nke uwe nchebe ahuike Na nzaghachi nye otutu ndi oru ulo ogwu ndi oria bu oria d…
Uru anyị: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa ...
Ihe mkpuchi ụmụaka nwere ike iwepu ihu
Oge ndu: Otutu (iberibe) 1 - 1000> 1000 Est. Oge (ụbọchị) 3 bemekorita atụmatụ: Nkwakọ ngwaahịa na mbupu: 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka nlele, orzọ-Ime Ọdụ ụgbọ elu / Port na-enweta 3. Ndị ahịa na-akọwapụta ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ụzọ mbupu ahia maka mkparịta ụka 4. Oge nnyefe: -7bọchị 3-7 maka ihe nlele; 5-25 ụbọchị maka ngwongwo ngwakọ. 5. Oge nnyefe ntanetị: 3-5bọchị 3-5 site na DHL / UPS / TNT / FEDEX express 6. Oge nnukwu Mbupu oge ...
Ibepu mkpocha ihu nke Nwa
Oge ndu: Otutu (iberibe) 1 - 1000> 1000 Est. Oge (ụbọchị) 3 To ga-enwe mkparịta ụka maka mmemme Mmepụta: Atụmatụ: Paymentkwụ Paymentgwọ :kwụ Yougwọ: can nwere ike ịkwụ ụgwọ maka iwu ahụ site na T / T, Ali Trade Assirm, Western Union Nnye Mbata: 1: Nlele nke ụbọchị 1-3 na-arụ ọrụ 2: Nnukwu ikike mmepụta oge 5-15 ụbọchị, dabere na ọtụtụ Ajụjụ: Q1: Ọ ga-ekwe omume ileta ụlọ ọrụ gị? Ulo oru anyi di na QuanZhou, Fujian Province. Anyị na-anabata gị ebe a. Ọtụtụ ndị ahịa sitere na mba niile ...
Ibepu Onweghi Mkpa Nkpuchi
Nkọwa name Aha ngwaahịa: Disposable Face Mask Place of Origin: Fujian, china Instrument klas: Class I Ihe: pp non woven, flter paper Agba: Blue / green / white / black Size: 17.5 * 9.5cm BFE: n'elu 99% Asambodo: Nchịkọta CE: 100000 Akpa / Akpa kwa ụbọchị Mmalite: China MOQ: mpempe 100000 Ngwa: Nlekọta onwe onye
Nwa nwere ike ihichapụ oji
Nkọwa name Aha ngwaahịa: Disposable Face Mask Place of Origin: Fujian, china Instrument klas: Class I Ihe: pp non woven, flter paper Agba: Blue / green / white / black Size: 17.5 * 9.5cm BFE: n'elu 99% Asambodo: Nchịkọta CE: 100000 Akpa / akpa dị kwa ụbọchị Mmalite: China MOQ: Iberibe 100000 Ngwa: Nkwakọ ngwaahịa onwe onye na mbupu: 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka ịlele, orzọ Ime ngwongwo, ...
Ihu ihu na Elastic Ear Loop
Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ụlọ, na Ngwuputa ihe 2. Ngwa: ndụ kwa ụbọchị, ihe omumu ụlọ ọrụ, SPAs, ụlọ ọgwụ, ụlọọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ, wdg.
Disposable Black Face Mask Disposable
Uru anyị: 1. Welcom OEM & ODM. 2. Ọnụahịa ụlọ ọrụ, enweghị ọdịiche ọnụahịa etiti. 3. Enwere ike ịchịkwa ịdị mma nke ọma. 4. Ọtụtụ ngwaahịa, ụdị, ụdị, imewe wdg. 5. Ihe ọ bụla ịchọrọ, anyị nwere ike ịchọ gị oge dị mfe. 6. Mara ahịa na ngwaahịa ọ bụla anyị nyere. 7. Ọkachamara ma nwee ahụmihe. 8. "Nzaghachi ngwa ngwa" & ezigbo ọrụ mgbe erere. Njirimara: Nkwakọ ngwaahịa & Mbupu: 1. FedEx / DHL / UPS / TNT maka ntom, orzọ-si-n'Ọnụ 2. Site na Ikuku ma ọ bụ site na S ...